Arsenal Oo Guul Dahabi Ah Ka Soo Gaadhay Toban Ciyaartoy Oo Watford Ah Iyo Gunners Oo Kaalinta Afraad Ku Soo Laabtay. - GOOL24.NET
Arsenal Oo Guul Dahabi Ah Ka Soo Gaadhay Toban Ciyaartoy Oo Watford Ah Iyo Gunners Oo Kaalinta Afraad Ku Soo Laabtay.
Arsenal ayaa guul dahabi ah ka soo gaadhay toban ciyaartoy oo kooxda Watford ah iyada oo Gunners iska reebtay rekoodhkii liitay ee kulamada ay martida soo ahayd Premier league. Aubameyang ayaa hal gool oo kaliya ku go’aamiyay kulankan kadib markii uu bilawgii kulankan qalad ku ciqaabay goolhayaha Watford.
Inkasta oo ay Watford 80 daqiiqo ku ciyaartay toban xidig oo kaliya haddana waxay Arsenal qaybtii labaad ku abuurtay fursado badan oo ay ciyaarta ugu soo laaban gaadheen.
Arsenal ayaa hadda awooday in ay kaalinta afraad kala baxday Chelsea oo ay waliba kulan ka hooseeyaan, waxayna Gunners kaalinta afraad ku soo gashay farqiga goolasha ee ay Chelsea ka sarayso.
Kaydka : Mohamed Elneny, Mesut Ozil, Petr Cech, Ainsley Maitland-Niles, Matteo Guendouzi, Alexandre Lacazette, Sead Kolasinac
Kaydka: Heurelho Gomes, Ken Sema, Nathaniel Chalobah, Miguel Britos, Marc Navarro, Adrian Mariappa, Isaac Success
Kooxda Watford ayaa qaadatay laba daqiiqo oo waali ah isla markaana ay Arsenal ugu wareejisay ciyaarta oo dhan waxayna ahaayeen laba daqiiqado oo ay Arsenal ku heshay wax ayna ka filayn bilawgii ciyaarta balse ay si lama filaan ah ku arkeen.
Daqiiqadii 10 aad Goolhayaha kooxda Watford ee Foster ayaa musiibo ku noqday kooxdiisa Watford kadib markii uu awoodi waayay in uu iska saaro kubbad dib loogu soo celiyay taas oo uu Aubameyang awooday in uu ku dhaliyo goolka furitaanka ee Arsenal isaga oo ciyaarta ka dhigay 1-0 ay Gunners hogaanka kula wareegtay.
Daqiiqadii 11 aad Kaadhka cas oo toos ah ayaa loo taagay Troy Deeney kadib markii uu jiqleeyay Lucas Torreira waxaana Watford isku raacay goolka laga dhaliyay iyo waliba casaanka tooska ah ee la siiyay Deeney taas oo keentay in laba daqiiqo gudahood ay Arsenal ku heshay waxyaabo ayna markii hore ka fikrayn maadaama oo ay Watford ka filaysay iska caabin xoogan.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayay Arsenal iyo Watford heleen fursado fiican oo ay goolal kale ku dhalin kareen balse waxay ku fashilmeen in ay wax goolal kale ah dhaliyaan waxaana qaybtii hore lagu kala nastay 1-0 ay Arsenal hogaanka kaga haysay tobanka ciyaartoy ee Watford garoonka ugu jiray.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta Unai Emery ayaa ciyarta soo galiyay Mesut Ozil wuxuuna badalay Lucas Torreira laakiin ciyaarta ayaa wali sii ahayd mid adag oo ayna Arsenal ka faa’iidaysan karin xidiga ay dheeraayeen Watford.
Daqiiqadii 59 aad Emery ayaa ciyaarta soo galiyay M. Guendouzi wuxuuna saaray K. Mavropanos laakiin Mkhitaryan ayaa daqiiqadii 61 aad kooxdiis Arsenal ka qasaariyay goolka ay hogaanka ku dheeraysan kareen.
Daqiiqadii 62 aad birta Goolka! Watford ayaa ugu dhawaatay in ay Arsenal ku ciqaabto fursad lumintii ay sameeyeen kadib markii uu Masina awooday in uu darbo hal taabasho ah uu birta ugu garaacay Arsenal waxayna ahayd fursad ay Watford ciyaarta ugu soo laaban gaadhay.
Daqiiqadii 68 aad Emery ayaa isbadal kale shaxdiisa ku sameeyay wuxuuna ciyaarta soo galiyay Maitland-Niles wuxuuna saaray Aaron Ramsey laakiin wali waxay Arsenal raadinaysya goolkii labaad ee ay ciyaarta ku dili lahayd.
Daqiiqadii 80 aad Watford ayaa u muuqatay in ay la imanayso goolka barbaraha oo cadaan ahaa kadib markii uu Gary dhulka dhigay goolhaye Leno isaga oo kubbad ka helay Doucoure iyo Success laakiin Maitland-Niles ayaa kooxiisa ka badabadiyay goolka ay ugu ceeboobi lahayd toban ciyaartoy oo Watford ah.
Arsenal ayaa si liidatay u ciyaartay qaybtii labaad ee ciyaarta taas oo keentay in toban ciyaartoy oo Watford ahi ay dhibaato wayn ku abuureen laakiin waxa ugu wayn ee ay kooxda Emery samaysay ayaa ahayd in ay goolkii ay guusha ku gaadhaysay difaacatay.
Watford oo dadaal badan muujisay ayaa ugu danbayn awoodi kari wayday in ay ciyaarta ku soo laabto waxayna Arsenal guul ku soo gaadhay 1-0 taas oo Arsenal ka caawisay in ay kaalinta afraad ugu soo laabtay farqiga goolasha iyada oo waliba Chelsea hal kulan ka hoosaysa.